ပြျောအောငျနဖေို့ဆိုရငျ… – Shinyoon
ပြျောအောငျနဖေို့ဆိုရငျ… ကိုယျ့ကို မပြျောစတေဲ့အရာတှကေို ခနျြထားရဈဖို့လိုတယျ …
ပြျောအောငျနဖေို့တဲ့…အရငျဆုံးကိုယျ့ကိုယျ ဘယျအရာတှကေ မပြျောစတောလဲဆိုတာကို အရငျဆုံးသိဖို့လိုအပျတယျ … ကိုယျပေးပမေယျ့ မယူတတျတဲ့လူတှလေား ကိုယျအလေးထားပမေယျ့လဲ ပွနျပွီးအလေးမထားတော့တဲ့ လူတှလေား ကိုယျ့ကို ပွနျမခဈြနိုငျတော့မယျ့လူလား
တဈခုခုကို သိထားဖို့လိုတယျ … တဈခါတဈလမှော သူ့ကိုပြျောပါစဆေိုပွီးထားပမေယျ့လဲ ကိုယျ့ကိုယျကိုကြ ဘယျလိုပြျောအောငျနရေမလဲဆိုတာ မသိတှဖွေဈနတေတျတယျ … အဲ့လိုအခြိနျတှမြေားလာတဲ့အခါ ကိုယျမွတျနိုးတှယျတာနမေိတဲ့အရာအပျေါ စိတျကုနျ စိတျပကျြလာတတျတယျ
လူတဈယောကျပဲ ဖွဈဖွဈ ပစ်စညျးတဈခုခုပဲ ဖွဈဖွဈ ဘယျအရာမဆို ကိုယျ့ကို ခဏခဏနာကငျြစလောပွီဆိုရငျတော့ ကိုယျဆကျပွီး ဖကျတှယျမထားတာအကောငျးဆုံးပါပဲ တခြို့မှာ ကိုယျ ပေးရတာနဲ့မတနျလောကျအောငျ ပွနျရလာတာတှကေ … နာကငျြစရာတှေ သကျသကျပဲ ဖွဈနတေတျတယျလေ
ကိုယျတနျဖိုးထားသလောကျ ကိုယျ့အပျေါတနျဖိုးမထားတဲ့လူနဲ့တှလေ့ာတဲ့အခါ တနျဖိုးတှအေကွောငျး ရှငျးပွမနပေါနဲ့တော့ ကိုယျခဈြသလောကျ ကိုယျ့အပျေါပွနျမခဈြနိုငျတဲ့သူအပျေါ မတှယျတာနဲ့တော့ ကိုယျ့အလေးထားသလောကျ ကိုယျ့အပျေါအလေးပွနျမထားတော့တဲ့လူတှကေို လဈြလြူရှုလိုကျတော့
တှေးကွညျ့ပါ …. ကိုယျ့ကိုယျကို နလေို့မပြျောတော့ဘူးလို့တှေးမိလာတဲ့အခါ ဘယျအရာက ကိုယျ့ကို မပြျောစတောလဲဆိုတာကိုတော့ ကိုယျ့ကိုယျကို သိဖို့လိုတယျ … ပွီးရငျ လှတျခခြဲ့လိုကျတော့…
ပျော်အောင်နေဖို့ဆိုရင်… ကိုယ့်ကို မပျော်စေတဲ့အရာတွေကို ချန်ထားရစ်ဖို့လိုတယ် …
ပျော်အောင်နေဖို့တဲ့…အရင်ဆုံးကိုယ့်ကိုယ် ဘယ်အရာတွေက မပျော်စေတာလဲဆိုတာကို အရင်ဆုံးသိဖို့လိုအပ်တယ် … ကိုယ်ပေးပေမယ့် မယူတတ်တဲ့လူတွေလား ကိုယ်အလေးထားပေမယ့်လဲ ပြန်ပြီးအလေးမထားတော့တဲ့ လူတွေလား ကိုယ့်ကို ပြန်မချစ်နိုင်တော့မယ့်လူလား
တစ်ခုခုကို သိထားဖို့လိုတယ် … တစ်ခါတစ်လေမှာ သူ့ကိုပျော်ပါစေဆိုပြီးထားပေမယ့်လဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျ ဘယ်လိုပျော်အောင်နေရမလဲဆိုတာ မသိတွေဖြစ်နေတတ်တယ် … အဲ့လိုအချိန်တွေများလာတဲ့အခါ ကိုယ်မြတ်နိုးတွယ်တာနေမိတဲ့အရာအပေါ် စိတ်ကုန် စိတ်ပျက်လာတတ်တယ်
လူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပစ္စည်းတစ်ခုခုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်အရာမဆို ကိုယ့်ကို ခဏခဏနာကျင်စေလာပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ်ဆက်ပြီး ဖက်တွယ်မထားတာအကောင်းဆုံးပါပဲ တချို့မှာ ကိုယ် ပေးရတာနဲ့မတန်လောက်အောင် ပြန်ရလာတာတွေက … နာကျင်စရာတွေ သက်သက်ပဲ ဖြစ်နေတတ်တယ်လေ
ကိုယ်တန်ဖိုးထားသလောက် ကိုယ့်အပေါ်တန်ဖိုးမထားတဲ့လူနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါ တန်ဖိုးတွေအကြောင်း ရှင်းပြမနေပါနဲ့တော့ ကိုယ်ချစ်သလောက် ကိုယ့်အပေါ်ပြန်မချစ်နိုင်တဲ့သူအပေါ် မတွယ်တာနဲ့တော့ ကိုယ့်အလေးထားသလောက် ကိုယ့်အပေါ်အလေးပြန်မထားတော့တဲ့လူတွေကို လျစ်လျူရှုလိုက်တော့
တွေးကြည့်ပါ …. ကိုယ့်ကိုယ်ကို နေလို့မပျော်တော့ဘူးလို့ တွေးမိလာတဲ့အခါ ဘယ်အရာက ကိုယ့်ကို မပျော်စေတာလဲဆိုတာကိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိဖို့လိုတယ် … ပြီးရင် လွှတ်ချခဲ့လိုက်တော့…
ပိုငျဆိုငျပွီးသှားရငျလဲ အရငျလို ဂရုစိုကျဖို့လိုပါသေးတယျ …